भारतीय बाँध निर्माण कार्य रोक्न नेपालीको माग – JANAMATPOST.COM :: NEWS FOR ALL
भारतीय बाँध निर्माण कार्य रोक्न नेपालीको माग
नेपाली सुरक्षाकर्मीले गरेको अनुरोधलाई भारतीय पक्षद्धारा अटेरी
२०७४, १० चैत्र शनिबार ०९:१२
परासी । भारतीय पक्षले नारायणी नदीमा निर्माण गरिरहेको बाँधका कारण पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाका १० बढी गाउँ डुबानको जोखिममा परेका छन् । एकतर्फी रुपमा भारतीय पक्षले नारायणी नदी छेउमा ठूलो बाँध निर्माण गर्दा वर्षायाममा सुस्ता गाउँपालिका ६० हजार बढी जनसंख्या विस्थापित हुने खतरा बढेको हो । निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न स्थानीयले नेपाल सरकार मार्फत भारत सरकारसँग पहल गर्न माग गरेका छन् । नेपाली पक्षको सरकारी निकायलेसमेत निर्माण कार्य रोक्न गरेको अनुरोधलाई भारतीयले बेवास्तागर्दै निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।
भारतीय पक्षले अहिले सुस्ता गाउँपालिका अन्तरगतको नर्सहीस्थित १२ नं. ठोकरको पारी पट्टी बाँध निर्माण गरिरहेको छ । भारतको बिहार प्रदेशमा पर्ने बाल्मिकी नगरको तिलभठ्ठा जंगलको नारायणी किनारमा ३ सय मिटर थप बाँध निर्माण गरिरहेको छ । ठूलो बाँध निर्माण गर्दा नारायणी नदीको धार परिवर्तन भई त्यसले नेपाली भूभागलाई डुबानमा खतरा बढेको स्थानीय अमित विकले बताए ।
आफ्नो भूभाग जोगाउनका लागि पाँच वर्षअघि गण्डक व्यारेजदेखि ३ कि.मि. बाँध निर्माण गरेको भारतीय पक्षले अहिले फेरि मर्मतका नाउँमा नयाँ बाँध निर्माण गरिरहेको छ । बाँध निर्माणका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने भएकाले दुई देशका प्रशासनहरुको सहमतिमा काम अगाडी बढाउन अनुरोध गर्दै साता दिन अघि सशस्त्र प्रहरी नेपाल बर्डर आउट सुस्ताको टोलीले भारतीय निर्माण कम्पनीसँग अनुरोध गरेको थियो । तर नेपाली पक्षको अनुरोधलाई वेवास्तागर्दै भारतले निर्माण कार्य अघि बढाएको हो । भारतीय पक्षले निर्माण कम्पनी मार्फत गराएको बाँध निर्माणका कारण नर्सही, प्रतापपुर, कुडिया, पक्लिहवा, बेलाटारी, गुठिप्रसौनीलगायतका गाउँ जोखिममा परेका छन् । अहिले निर्माण गरेको बाँधको चौडाई करिब ६० मिटर छ । ५ मिटर खाल्डो खनेर ८ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताए ।
भारतीय पक्षले जंगल क्षेत्रलाई सुरक्षित गराउने बहानामा गरिरहेको बाँध निर्माण कार्यलाई बढाउँदै सुस्ता गाउँसम्म पु¥याउने योजनामा रहेको स्थानीयको भनाई छ । बाँध निर्माण भइरहेको क्षेत्रबाट भारतले सधैं विवादमा ल्याउने गरेको नेपालको सुस्ता गाउँ करिब ४ कि.मि.को दुरीमा छ । नेपाली भूभाग अतिक्रमणगर्दै आएको भारतीय पक्षले बाँध निर्माणका नाउँमा फेरि सुस्तालाई अतिक्रमण गर्न खोजेको आशंका स्थानीयको छ ।
बाँध निर्माण कार्यलाई रोक्नका लागि स्थानीय प्रशासनमार्फत भारतीय प्रशासनसँग पहल गर्न कुराकानी अघि बढाउने अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले बाँध निर्माणले नेपाली भूभाग उच्च जोखिममा पर्ने देखिएको बताए । भारतले आफ्नो भूमीमा बाँध बनाउन पाउने देखिएपनि त्यसले नेपाली भूभाग र स्थानीयहरु विस्थापित हुने अवस्था आउने देखिएका उनको भनाई छ ।
पुरानो बाँध मर्मतसँगै केही नयाँ पनि निर्माण गरेको पाइएको राना मगरले बताए । ठूलो बाँध निर्माणसँगै नयाँ बाँधले गण्डकका संरचना भत्किन सक्ने र त्यसले डुबान र विस्थापितको खतरा बढेको बारे भारतीय प्रशासनसँग छलफल गर्न पहल गरिरहेको प्रजिअ राना मगरले बताए ।